Barcelona oo bilowday in ay u dhaqaaqdo soo xero galinta mid ka mid ah xidigaha kooxda Chelsea – Gool FM
Barcelona oo bilowday in ay u dhaqaaqdo soo xero galinta mid ka mid ah xidigaha kooxda Chelsea
(Barcelona) 15 Dis 2018. Barcelona ayaa bilowday in ay u dhaqaaqdo soo xero galinta difaaca kooxda Chelsea Andreas Christensen, kadib marka uu furmo suuqa bisha Janaayo ee soo aadan.
Barcelona ayaa eeganeysa inay sameyso saxiixa difaac cusub xiliyada soo aadan, si ay u daboosho booska uu dhaawaca kaga maqan yahay Samuel Umtiti, kaasoo weli qaba dhaawac dhanka jilibka ah.
Sida laga soo xigtay ilo wareedyo isku mid ah, kooxda reer Catalonia ayaa wadahadal la bilaabi doonta Chelsea bisha Janaayo si ay heshiis ugu saxiixdaan daafaca reer Denmark ee Andreas Christensen si uu ugu buuxiyo booska uu ka maqan yahay Umtiti.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in xilligan la joogo aysan jirin wax heshiis ah ay wada gaareen labada kooxood, laakiin ciyaaryahanka ayaa doonaya inuu qeyb ka noqdo qorshaha garoonka Nou Camp.
Xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay Christensen ayaa door weyn ee muuqda ku lahaa qorshaha macalinkii hore kooxda Chelsea ee reer Talyaani Antonio Conte ka hor inta uusan Maurizio Sarri xili ciyaareedkan ku ilaabin kursiga keydka, kadib markii uu ka door biday markale David Luiz.
HORDHAC: Torino v Juventus